अन्तर्राष्ट्रिय Archives – Mukundasen Television
गैँडाकोट,असोज ११ । नेपाली काँग्रेसको आसन्न १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत गैँडाकोट नगरसभापतिमा खेमराज सापकोटाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउनुभएको छ । सोमबार विहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै सापकोटाले राजनीतिक निष्ठा र गैँडाकोटको भरोसा कायम राख्न आफुले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउनुभएको छ । सापकोटाले अब आफ्नो कुनै प्यानल नहुने आफु स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको बताउनुभएको छ । यस अघि आफ्नो प्यानलमा रहेका साथीहरु जुन सोचले जता गएपनि आगामी दिनमा उहाँहरु सहयात्री हुने खेमराज...
एजेन्सी, ५ असोज । एक महिलाले फास्ट फूड रेस्टुरेन्टमा चिकेन बर्गर अर्डर गरिन् । महिलाले बर्गरको पहिलो गाँसमै जे भेटिन्, त्यो देखेपछि उनको हालत खराब भयो । न्यूयोर्क पोस्टको रिपोर्ट अनुसार बोलिभियामा बस्ने इस्टेफनी बेनिटेज एक फास्ट फूड रेष्टुरेन्टमा बर्गर खान गएकी थिइन् । पहिलो बाइट लिँदा उनले केही कडा चिज महसुस गरिन् । जब बेनिटेजले के रहेछ भनेर हेरिन् तब उनको होस उड्यो किनभने चिकेन बर्गरभित्र मानिसको औंला भेटिएको...
Massive Dixie fire rages in northern California eight missing
A tiny northern California mountain town that dates back to the gold rush era fell victim this week to the Dixie fire, which started on July 14 and has blackened 504 square miles in the state. Greenville’s roughly 1,000 residents were urged to evacuate on Wednesday as the flames closed in and burned down various wooden buildings, some of which were more than 100 years old. The Plumas County Sheriff’s Office...
काठमाडौँ, २० साउन। चीनको हुबे प्रान्तको वुहान शहरबाट डेढ वर्षअघि शुरु भएको कोरोना भाइरसको विभिन्न भेरिएन्टले विश्वभर ४२ लाख ४६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान लिएको छ । विश्वभर कूल सङ्क्रमितको संख्या पनि २० करोडको हाराहारीमा छ । विश्वभर १९ करोड ९५ लाख ६६ हजार ४९ जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भइसकेका छन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको यो संख्या विश्वको जनसंख्याको २।५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जति समय बित्यो त्यति नै यो भाइरसको...
काठमाडौं। आज देशभरका मस्जिदमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान् पर्व बकर इद (इदुल जोहा) हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ । इदुल फित्रअर्थात् रमजान पर्वको ७० औँ दिनमा बकर इद मनाउने धार्मिक विधि रहिआएको छ। इस्लामिक पात्रोअनुसार १२ औँ महिनाअर्थात् दिल हिज्जाको १० औँ दिन यो पर्व मनाउने गरिएको हो। यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बी बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन् । नमाज पढिसकेपछि एकापसमा अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ। यस...
फिलिपिन्समा खोप लगाउन नमान्नेलाई जेल हालिने ।
८ असार । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतुर्तेले कोरोनाभाइरसविरूद्धको खोप लगाउन अस्वीकार गर्नेलाई जेल हाल्दिने चेतावनी दिएका छन् । टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै दुतुर्तेले भने– तपाईंले भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ वा जेल जानुपर्छ। राजधानी मनिलाका खोप केन्द्रहरूमा एकदमै कम मानिसहरू खोप लगाउन गएपछि राष्ट्रपति दुतुर्तेले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। खोप नलगाइदिने फिलोपिनोहरूको व्यवहारले दिक्क भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति दुतुर्तेले देश संकटमा भएकाले आफूलाई गलत रूपमा नबुझ्न पनि भनेका छन्।फिलिपिन्समा अहिलेसम्म १३ लाख मानिसमा कोरोनाभाइरसको...
काठमाडौं, ३ असार । पोर्चुगलले नेपाललाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम नघटेको कारण देखाउदै यात्रा प्रतिवन्ध गरेको हो । नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचिमा राख्दै जुन १५ देखि पोर्चुगलले नेपालीलाई रोक लगाएको हो । जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, चीन, इजरायल, न्यूजिल्यान्ड, रुवान्डा, सिंगापुर र थाइल्यान्डलाई भने यात्राको अनुमति दिएको छ । पोर्चुगलले कोभिड–१९ परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाए यी देशलाई यात्रा अनुमति दिने भएको हो । पर्यटनलाई चलायमान बनाउन भन्दै...
नयाँ दिल्ली, २ असार । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमित भएकाहरुको सङ्ख्यामा कमी हुँदै आएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा ६२ हजार २२४ जना कोरोनाभाइरसबाट थप सङ्क्रमित भएका छन् । यो सङ्ख्या अघिल्ला दिनहरुको भन्दा कम हुँदै गएको हो । केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले ३।२२ प्रतिशतको दरले सङ्क्रमण घटेको जनाएको छ । पछिल्लो नौ दिनमा औसतमा ९ प्रतिशतको दरले सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्यामा कमी हुँदै आएको मन्त्रालयका...
ब्राजिल,२५ जेठ । ब्राजिलमा कोभिड १९ को सङ्क्रमणबाट एकै दिनमा एक हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको बताइएको छ । यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले दिएको समाचारअनुसार यहाँ गत २४ घण्टामा १ हजार १० जनाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट निधन भएको हो । योसँगै ब्राजिलमा अहिलेसम्ममा ज्यान जाने व्यक्तिको संख्या ४ लाख ७४ हजार भन्दा बढी पुगेको बताइएको ब्राजिलका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । गत २४ घण्टामा ब्राजिलमा ३७ हजार ३२६ जना थप व्यक्तिमा कोरोना...